Warshadda dharka aan dabka lahayn - Shiinaha Soosaarayaasha dharka aan dabka lahayn, Alaab-qeybiyeyaal
Mashiinka dhoobada dhoobada ah wuxuu ka samaysan yahay dhoobada dhoobada ah iyo qayb cayiman oo ka mid ah fiyuuska dabiiciga ah, oo lagu dhejiyay faybarka dhalada (silig bir ah), oo lagu miiqay dunta, ka dibna lagu tolay maro.
Adeegsiga ugu muhiimsan ee dharka darbiga daah qiiqa:
a. Nalalka korantada: dharka darbiga daahyada qiiqa dushiisa wuxuu leeyahay darajo heer sare oo dahaadh ah, wuxuu u adkeysan karaa culeyska korantada oo sarreeya, waxaana laga dhigi karaa maro dahaadhan, gacmo iyo alaabooyin kale.
b. magdhaw aan biraha ahayn: maro caag ah oo silikoon ah ayaa loo isticmaali karaa qalab isku xira dabacsan oo tuubooyin ah. Waxay xallin kartaa burburka ka dhashay ballaarinta kuleylka iyo foosha qabow, iyo dharka silikoonku wuxuu leeyahay caabbinta heerkulka sare, ka hortagga daxalka, waxqabadka gabowga, dabacsanaanta iyo dabacsanaanta. Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa batroolka, warshadaha kiimikada, sibidhka, ilaha tamarta iyo beero kale.
Tarpaulin dabka ka samaysan wuxuu ka samaysan yahay heerkul sarreeya oo u adkaysata, ka-hor-tagga iyo maaddada fiber-ka dhalada ah ee xoogga sare leh, taas oo lagu shubo ama lagu dhalo caag silikoon ah. Waa shey walxo cusub oo isku dhafan oo leh waxqabad sare iyo ujeedo badan.
Maro dab-damis ah iyo Tape Silikoon
Maro aan dabka laga shidan ayaa inta badan ka samaysan fibre aan dabka iyo dabka guban karin, kaas oo lagu farsameeyo hanaan gaar ah. Astaamaha ugu muhiimsan: aan guban karin, heerkulkiisu sarreeyo (550-1100 digrii), qaab dhismeed is haysta, xanaaq la'aan, qaab jilicsan oo adag, fudud oo lagu duubo walxaha iyo qalabka aan sinnayn. Marada dabka ka caagan ayaa ka ilaalin kara walxaha meelaha kulul iyo dhimbiillada, iyo ka hortagga ama go'doominta gubashada gebi ahaanba.
Marada dabka ka caagan ayaa ku habboon alxanka iyo munaasabadaha kale oo leh dhimbiillo fududna sababi kara dabka. Wuu iska caabin karaa dhimbiillo, xaaruf, wax alxamid, iwm. Way go'doomin kartaa goobta shaqada, kala saartaa lakabka shaqada, waxayna baabi'in kartaa qatarta dabka ee ka dhalan karta shaqada alxanka. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa daboolida khafiifka ah, iyo in la dhiso goob shaqo oo aamin ah, nadiif ah oo jaango'an.